Njem London | Akụkọ Njem
London bụ otu n'ime obodo ndị kachasị ibu na nke kachasị egwu n'ụwa. Ma ị na-eleta isi obodo Britain maka oge mbụ ma ọ bụ na ị bụrụla narị otu narị oge, ị ga-ahụ ihe ịtụnanya na nke ọhụrụ ị ga-eme. Ọ bụ ya mere ọtụtụ ndị njem ji ahọrọ ịga njem na Europe.
Agbanyeghị, mgbe ọpụpụ United Kingdom site na EU, ọtụtụ ajụjụ na-ebilite gbasara akwụkwọ ndị a ga-achọ site ugbu a gaa n'ihu, usoro ndị a ga-arụ ma ọ bụ na enwere ike iji otu kaadị ahụ ike ahụ.
Echegbula, lee ụfọdụ ajụjụ ị nwere ike ịjụ onwe gị mgbe ị na-eme njem London mgbe Brexit gachara.
Agbanyeghị na ọpụpụ nke United Kingdom na European Union bụ ọrụ kemgbe Febụwarị 1, 2020, ọ gaghị enwe mmetụta zuru oke ruo oge mgbanwe a zubere ruo na njedebe nke afọ a.
1 Paspọtụ maka njem na London
2 Ikike ndị njem
3 Inye mkpuchi ahụike na kaadị ahụike Europe
4 Ekwentị na Intaneti
Paspọtụ maka njem na London
Ruo Jenụwarị 1, 2021 ị ga-enwe ike ịbanye na United Kingdom dịka ọ dị na mbụ na NJ gị ma ọ bụ paspọtụ Spanish. Agbanyeghị, mgbe oge mgbanwe a gasịrị, ndị ọchịchị Britain ga-achọ ezigbo paspọtụ ọ bụ ezie na ọ bughị ụzọ hụ na visa ga-adị mkpa, opekata mpe maka ịnọ ihe na-erughị ụbọchị 90.
O kwere omume na emesịa njikwa ndị ọzọ akọwapụtara ga-arụ na ọdụ ụgbọ elu ma ha nwere ike ịjụ gị, dịka ọmụmaatụ, ihe kpatara njem ahụ ma ọ bụ oge ya, nke ga-egosi oge nchere ọzọ.
Ikike ndị njem
Enweghi mgbanwe di egwu banyere mgbanwe nke ikike ndi njem n'ihi na iwu European ugbu a metụtara ụgbọ elu n'ime EU yana ụgbọ elu si mba EU gaa mba nke atọ. Ọ na-ekpuchi ụgbọ elu site na mba na-abụghị EU gaa mba EU, ọ bụrụhaala na ọ bụ ụgbọ elu Europe na-arụ ọrụ ụgbọ elu ahụ.
Ozi ọma maka ndị njem bụ na enwere ike ịnabata iwu ọhụrụ nke Britain, ọbụlagodi mgbe ha si na EU pụọ, na-etinye ụkpụrụ European na imezigharị ya iji kpuchie ụgbọ elu niile dị ka a ga - asị na UK nọgidere bụrụ onye otu EU. Ya mere, a gaghị enwe nnukwu mgbanwe na ikike enyere n'iwu Europe.
Inye mkpuchi ahụike na kaadị ahụike Europe
Tupu Brexit, CEAM kwere ka nwa amaala Europe ọ bụla nweta ọrụ ahụike na mba EU ọ bụla. Agbanyeghị, ugbu a UK ebighizi na European Union, CEAM agaghịzi adị irè site na Jenụwarị 1, 2021. Yabụ, ọ kacha mma wepụ mkpuchi njem n'oge njem London ma ọ bụ ezumike na mba ahụ.
Ekwentị na Intaneti
Nke a ga-adabere na onye ọrụ mkpanaka nke onye njem ọ bụla. Ka ọ dị ugbu a, ojiji nke mobiles na UK jikọtara ya na iwu EU maka ịkpọ na ịnweta ịntanetị (ntụgharị data). Mgbe Brexit gasịrị, Fọdụ ndị ọrụ Bekee ekwupụtalarị na ha ga-aga n'ihu na-enye uru a, yabụ ọ bụ ihe amamihe iji kpọtụrụ onye na-ahụ maka ọrụ gị maka ozi ndị ọzọ tupu ịga London.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Njem london